မက်ဆီဟာ မန်စီးတီး အသင်းမှာကစားဖို့ အဆင့်မမီဘူး ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်အပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းနေရပြီဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးပွဲဝေဖန်သုံးသပ်သူအမျိုးသမီး - SPORTS MYANMAR
မက်ဆီဟာ မန်စီးတီး အသင်းမှာကစားဖို့ အဆင့်မမီဘူး ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်အပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းနေရပြီဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးပွဲဝေဖန်သုံးသပ်သူအမျိုးသမီး
BBC နဲ့ Sky Sports တို့မှာဘောလုံးပွဲဝေဖန်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဲလက်စ် စကော့ဟာ အာဂျင်တီးနား စတားမက်ဆီ အပေါ် ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ မှတ်ချက် တခုကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ ပြသနာတက်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။အဲလက်စ်စကော့ က မန်စီးတီး နည်းပြကြီးဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ လက်ရှိသူ့အသင်းမှာမက်ဆီကိုရွေးချယ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မကြာသေးမီက ဝေဖန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလက်စ် စကော့ဟာဒီအကြောင်းတွေကို ခရစ်ကာမာရာ နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ ကအစီအစဉ်တခုဖြစ်တဲ့ goals on sunday မှာ ပြောဆိုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအစီအစဉ်မှာ စကော့က -” ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီး အသင်းဘယ်လိုကစားနေတယ်ဆိုတာ တချက်လောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါရှင်။အားလုံးက ရာနှုန်းပြည့်တမ်ပို နဲ့ အတူဖိအားပေးကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာလိုသလားဆိုတာတောင် ကျွန်မ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့်မက်ဆီ ဟာ မက်ဆီ ပဲ ဆိုတာ ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။သူဟာ ပွဲတွေ ကို အနိုင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ကစားသမား တဦးချင်းစီတိုင်းက ပြိုင်ဘက်တွေကို ဖိအားပေးကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမတူညီတဲ့ တမ်ပိုလည်းဖြစ်ပါတယ် ” လို့ပြောဆိုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်း သူ့အစီ အစဉ်ရဲ့ ပရိသတ် အချို့ကို လျှော့ခ်ရသွားစေခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုတွေကို ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ မက်ဆီ ရဲ့ အသင်းအတွင်း ပါဝင်နေမှုကိုတောင် မေးခွန်းထုတ်နေတာလားဆိုတဲ့ ယူဆမှုတွေကိုပါ ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် အဲလက်စ် စကော့ က သူမရဲ့ တွစ်တာအကောင့်ကနေ –
” ယနေ့ ခေတ် မန်စီးတီး အသင်းမှာ မက်ဆီက ပါဝင်ပြီး အသားကျနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါသလား ? သူအသားကျနိုင်မယ်ဆိုတာအားလုံး အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တုန်းက ကျွန်မပြောခဲ့တာက ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ မက်ဆီ အသားကျနိုင်ဖို့အတွက် မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားပေး ကစားပုံကို ပြင်မယ်လို့ ထင်ပါသလားဆိုတဲ့ အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသာဆိုရင် သူပြင်ပါ့ မလားရှင် ” လို့ရေးသားတုန့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ တွစ်တာ post အပေါ် ပရိသတ်တဦးက –
” ဒါဟာ အတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတခုဖြစ်ပါတယ် ” လို့မှတ်ချက်ပေးတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြားသူတဦးကလည်း ” မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ခေတ် မန်စီးတီး အသင်းက တဦးတယောက်တည်းကို ယုံကြည်ကိုးစားလွန်းနေတဲ့ အသင်းမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ် ဘာကာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တဲ့ အခါ ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီး အသင်းမှာ မြင်ရမယ့် အလှတရားလည်းဖြစ်ပါတယ် ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲလက်စ် စကော့ ဟာ အင်္ဂလန် နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းတွေရဲ့ အမျိုးသမီးဘောလုံး သမားဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးကစားသမား ဘဝကနေ အနားယူအပြီးBBC နဲ့ Sky Sports တို့မှာ ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မကျဆီဟာ မနျစီးတီး အသငျးမှာကစားဖို့ အဆငျ့မမီဘူး ဆိုတဲ့ မှတျခကျြအပျေါပွနျလညျဖွရှေငျးနရေပွီဖွဈတဲ့ ဘောလုံးပှဲဝဖေနျသုံးသပျသူအမြိုးသမီး
BBC နဲ့ Sky Sports တို့မှာဘောလုံးပှဲဝဖေနျသူအဖွဈ လုပျကိုငျနတေဲ့ အဲလကျဈ စကော့ဟာ အာဂငျြတီးနား စတားမကျဆီ အပျေါ ဝဖေနျခဲ့တဲ့ မှတျခကျြ တခုကွောငျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ ပွသနာတကျနရေပွီ ဖွဈပါတယျ။အဲလကျဈစကော့ က မနျစီးတီး နညျးပွကွီးဂှာဒီယိုလာအနနေဲ့ လကျရှိသူ့အသငျးမှာမကျဆီကိုရှေးခယျြမှာ မဟုတျဘူးလို့ မကွာသေးမီက ဝဖေနျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲလကျဈ စကော့ဟာဒီအကွောငျးတှကေို ခရဈကာမာရာ နဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှေ နေ့ ကအစီအစဉျတခုဖွဈတဲ့ goals on sunday မှာ ပွောဆိုမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ထိုအစီအစဉျမှာ စကော့က -” ဂှာဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီး အသငျးဘယျလိုကစားနတေယျဆိုတာ တခကျြလောကျကွညျ့ လိုကျစမျးပါရှငျ။အားလုံးက ရာနှုနျးပွညျ့တမျပို နဲ့ အတူဖိအားပေးကွိုးစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လညျး မေးခှနျးထုတျစရာလိုသလားဆိုတာတောငျ ကြှနျမ မသိပါဘူး။
ဒါပမေယျ့မကျဆီ ဟာ မကျဆီ ပဲ ဆိုတာ ကြှနျမနားလညျပါတယျ။သူဟာ ပှဲတှေ ကို အနိုငျရအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ ကစားသမား တဦးခငျြးစီတိုငျးက ပွိုငျဘကျတှကေို ဖိအားပေးကစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ဒါဟာမတူညီတဲ့ တမျပိုလညျးဖွဈပါတယျ ” လို့ပွောဆိုမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လညျး သူ့အစီ အစဉျရဲ့ ပရိသတျ အခြို့ကို လြှော့ချရသှားစခေဲ့ပွီး ဝဖေနျမှုတှကေို ခံလာရတာဖွဈပါတယျ။သူဟာ မကျဆီ ရဲ့ အသငျးအတှငျး ပါဝငျနမှေုကိုတောငျ မေးခှနျးထုတျနတောလားဆိုတဲ့ ယူဆမှုတှကေိုပါ ခံလာရတာဖွဈပါတယျ။
ဒီလို အခွအေနတှေကွေောငျ့ အဲလကျဈ စကော့ က သူမရဲ့ တှဈတာအကောငျ့ကနေ –
” ယနေ့ ခတျေ မနျစီးတီး အသငျးမှာ မကျဆီက ပါဝငျပွီး အသားကနြိုငျမယျလို့ ယူဆပါသလား ? သူအသားကနြိုငျမယျဆိုတာအားလုံး အသိပဲဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ အစီအစဉျတုနျးက ကြှနျမပွောခဲ့တာက ဂှာဒီယိုလာအနနေဲ့ မကျဆီ အသားကနြိုငျဖို့အတှကျ မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ဖိအားပေး ကစားပုံကို ပွငျမယျလို့ ထငျပါသလားဆိုတဲ့ အမွငျပဲဖွဈပါတယျ။ဒီလိုသာဆိုရငျ သူပွငျပါ့ မလားရှငျ ” လို့ရေးသားတုနျ့ပွနျသှားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ တှဈတာ post အပျေါ ပရိသတျတဦးက –
” ဒါဟာ အတျောလေးကိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ မေးခှနျးတခုဖွဈပါတယျ ” လို့မှတျခကျြပေးတုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။အခွားသူတဦးကလညျး ” မေးသငျ့တဲ့ မေးခှနျးဖွဈပါတယျ။ဒီနေ့ ခတျေ မနျစီးတီး အသငျးက တဦးတယောကျတညျးကို ယုံကွညျကိုးစားလှနျးနတေဲ့ အသငျးမြိုးမဟုတျတော့ပါဘူး။ဒီနခေ့တျေ ဘာကာနဲ့ ယှဉျကွညျ့တဲ့ အခါ ဂှာဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီး အသငျးမှာ မွငျရမယျ့ အလှတရားလညျးဖွဈပါတယျ ” လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
အဲလကျဈ စကော့ ဟာ အင်ျဂလနျ နဲ့ အာဆငျနယျ အသငျးတှရေဲ့ အမြိုးသမီးဘောလုံး သမားဟောငျးတဦးဖွဈပွီးကစားသမား ဘဝကနေ အနားယူအပွီးBBC နဲ့ Sky Sports တို့မှာ ဘောလုံးဝဖေနျသုံးသပျသူအဖွဈလုပျကိုငျနတောဖွဈပါတယျ။